Shiinaha warshad mashiinka qolka faakuumka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Boya
Maaddaama mid ka mid ah soo saarista hoggaamineed ee xirmooyinka jilicsan ee Shiinaha, Boya kaliya kuma siineyso qalabka wax lagu duubo laakiin sidoo kale mashiinka wax lagu duubo. Mashiinka baakada faakiyuumka daboolaya otomaatiga ah, mashiinka baakadka faakiyuumka oo duuban oo duuban, mashiinka baakadka faakiyuumka, mashiinka baakadka qolka faakiyuunka.
Mashiinkaan baakidhka qolka yar ee faakuumku wuxuu leeyahay hal qol oo shaqeeya, oo ku habboon warshad yar, machad cilmi-baaris, shaybaar… ..Waa faa'iidada isticmaalka tamarta yar oo ku habboon isticmaalka. Mashiinkaan waxaa loo isticmaali karaa boorsooyin aad u tiro badan tusaale ahaan bacaha faakiyuumka flat, bacda faakiyuumka la soo saaray, bacda jiinyeerka, boorsada istaaga iwm.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad cuntada ku rido bacaha baakadaha ka dibna ku rid qolka faakiyuumka .Kadib markii uu daarana wuxuu hawada ka soo saarayaa qolka faakuumka iyo boorsada .Marka ay dhammaan howlaha baakidhka faakuumku dhammaystirmaan bacda ayey shaabadaysa.
Astaamaha muhiimka ah sida hoos ku xusan:
●Dabacsanaan heer sare ah iyo tayada xirmada
●Naqshad adag oo waarta
●Isticmaalka tamarta iyo qalabka baakadaha
Mashiinnada qolka faakuumka Boya waa dhammaantoodba heer sare oo tayo baakad ah, habka nabdoon ee mashiinku waa mid ka mid ah qodobka ugu muhiimsan .Mashiinkaan qolka yar ayaa ah mid si nabadgelyo leh loo soo farsameynayo oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo boorso ah. Ikhtiyaar ahaan waa lagu qalabeyn karaa nidaamka nadiifinta gaaska iyo xulashada qalabka leh bambooyin faaruq ah.
Maadaama aan nahay alaab-bixiye xalal dhameystiran, waxaan marwalba hubineynaa isdhexgalka ka dhexeeya walxaha baakadka, faaruqinta, jawiga jawiga, badeecada, iyo mashiinka tixgelin la siinayo - oo aan si nidaamsan ula jaanqaado mashiinada tikniyoolajiyadda iyo qalabka.
Waxaan jeclaan lahayn inaan noqono qibradaada baakadaynta si aan u qaabeyno xalka baakadka gaarka ah adigaa iska leh
Hore: mashiinka kuleylka
Xiga: mashiinka maqaarka faakiyuumka